Goynta gadhka - Daryeelka iyo daaweynta ugu fiican | Ragga Caqliga leh
Gadhka oo xardhan
Hadaad go’aansato gadh yeelato ama bilaw daryeelkiisa Iyaga oo wada fiirsanaya, halkan waxaan ku siinaynaa daryeelka ugu weyn si aad u yeelato wax aan fiicnayn. Haddii dayactir wanaagsan kadib aad go'aansato inaad samaysato habayn wanaagsan, waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad ogaato wax kasta oo aad u baahan tahay inaad haysato una gadhka qurux badan
In aad gadhkaaga u samaysato habayn wanaagsan ayaa la mid noqon doonta soo bandhig muuqaal qurxoon, inaad taqaanid sidaad naftaada u daryeeli lahayd taasina waxay ka muuqataa muuqaal caafimaad qaba oo nadiif ah. Si kastaba ha ahaatee, gadhka fiican wuxuu ka bilaabmaa sida saxda ah dad badan oo caafimaad qaba, sida loo daryeelo iyo qaabkee waa inaan u qeexnaa si ay ugu muuqato sida ugu wanaagsan.
1 Sida loo helo gadh buuxa
2 Daryeelka gadhka gaarka ah
3 Qaabaynta gadhka
4 Taabashadii ugu dambaysay
Haddii ujeedada koowaad tahay leeyihiin a gadhka cawska lehWaa inaad ogaataa in tani ay tahay tallaabada ugu horreysa. Waa maxay sababta gadhka buuxa? Sababtoo ah waa astaan ​​bikranimo oo dad badani waxay u arkaan dareenkaas mid weyn ragannimo, awood, hoggaamin. Laakiin isku dayga inaad yeelato gadh buuxa marka ugu horreysa way adkaan kartaa haddii aan isku dayno mudnaan.
Waa run in gadhka koraysa sanadaha soo socda awgood. Dhallinta doonaysa inay gadh buuxa yeelato waxay ku kici doontaa sannadaha ugu horreeya oo waa inay waqti u siisaa natiijooyinkaas. Laakiin waxaa jira rag aysan taasi ku dhicin iyaga oo leh markii ugu horreysay gar wanaagsan.
Waa inaad gadhka korisaa ugu yaraan hal bil oo aan dib -u -habayn, si ay si toos ah oo xoog leh u koraan. Haddii uu jiro cuncun badan inta uu korayo, waxaad isticmaali kartaa a saliid gaar ah cuncun iyo cuncun. Raggaas oo doonaya inay u ekaadaan gadh weyn oo da 'weynna, waxay u adeegsan karaan midabada si loo abuuro isku ekaansho badan.
Daryeelka gadhka gaarka ah
Fikradda daryeelka waxaa loogu talagalay caafimaad iyo dhalaal eeg. Garku waa inuu ahaadaa mid nadiif ah waana tan aan ku dhaqnaa saabuun gaar ah. Shaambo -qubeyska wax qiimo ah naguma laha, maadaama aysan u gaar ahayn ujeeddadan oo ay dhaawici karaan maqaarka.
Waxaan timaha si tartiib ah ugu duugi doonaa saabuunta oo ku qalajin doonaa tuwaal jilicsan. Dhammaan hadhaaga suurtogalka ah waa in la saaraa wasakh iyo walxo gees walba. Ugu dambayn waa la codsan karaa qaboojiye gaar ah Waxay hagaajin doontaa googoyskii burburay. Qayb yar ayaa la adeegsan doonaa oo si tartiib ah loo duugi doonaa si aad u hesho natiijo siman oo dhalaalaya.
Saliid gadh Waa mid kale oo ka mid ah badeecadaha aad waqti ka waqti qaadan karto si aad timaha ugu quudiso ugu badnaan. Waxaad codsan kartaa inaad sidoo kale qoyso maqaarka. Sidaan hore u eegnay waxay jilcin doontaa timaha si aysan cuncun u jirin waxayna quudineysaa timaha timaha si ay u koraan caafimaad badan.
Balmka sidoo kale waa badeecada korontada. Waxaad ku qaadan kartaa jeebkaaga si aad u dalban karto wakhti kasta. Ujeeddadiisu waxay noqon doontaa si garku u fuuqo, u yeesho muuqaal caafimaad leh iyo inay u muuqato inay aad u dhumuc weyn tahay.
Si aad u bilowdo qeexidda iyo jaridda gadhkaaga waa inaad raadsataa mid wanaagsan mashiinka qurxinta timaha. Makiinadani waxay leeyihiin madaxbannaanida in laga hagaajiyo 2mm ilaa 6mm. Waxaa ugu wanaagsan in laga bilaabo masaafada ugu dheer si loo dhammeeyo xagga ugu gaaban.
Waa inaad hor istaagtaa muraayadda iyo fiiri isbarbardhigga aad rabto inaad gaarto. Waxaad bilaabi doontaa raadinta midda ka bilaabmaysa sanka labada weji dhinac ama dhegaha. Qaybaha dhabannada waa in la xiiraa.
Dhinaca gadhka Waa in si fiican loo xiiraa oo loo qaloociyaa dhinaca dhegta. Waxaan calaamadayn doonaa xariijin sixitaan oo labada dhegood u dhexeeya daanka. Waa inaad si fiican ugu jartaa mashiinka ilaa aad ka hesho dhererka la rabo. Haddii aad leedahay gadh aad u dheer oo aadan rabin inaad ka saarto dhererka, waxaad naftaada ku caawin kartaa maqas wanaagsan.
Ugu dambayn, ha iloobin xannuun, waa inaad samaysaa toosan oo toosan oo toosan oo u dhexeeya macbudka iyo dhegta, kaas oo si fiican u dhammaaday ilaa garka. Sidoo kale ha iloobin qaybta hoose ee qoorta, waa inaad ka tagtaa aaggaas si fiican loo soo koobay si ay u jilicsanaato isha.
Taabashadii ugu dambaysay
Si aad u dhammayso hagaajinta gadhka waa inaad raacdaa tafaasiilkan u dambeeya. Haddii aad xiiratay meelaha qaar ee aad qaadan karto kareem maqaarka ku yaal si looga fogaado guduudasho suurtogal ah. Waxaa jira dhowr kareem oo ka-xiiridda ka dib suuqa oo shaki la'aan kuwa ugu fiican maqaarkaagu waa kuwa ku salaysan aloe vera.
Waad siin kartaa taabasho jilicsanaanta iyo dhalaalka gadhkaaga oo leh beeyo kor lagu sharaxay. Laakiin haddii shaygaagu yahay hagaajinta gadhka waxaad isticmaali kartaa badeecooyin gaar ah gadhka hagaajin. Waxay yihiin kiriimyo cufan oo ku salaysan waxsoosaarka si aad u heshid qabqabasho fudud ilaa dhexdhexaad ah, haa, oo leh muuqaal matte ah. Isticmaalka hagaajintan waxay gacan ka geysan doontaa xakamaynta timaha aan hagaagsanayn waxayna gacan ka geysan doontaa qaabeynta aagagga aan hagaagsanayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Gadhka oo xardhan
Timaha casriga ah ee wiilasha
Timaha xubinta taranka ee ragga